MAYELANA NATHI | I-Nicot Motorcycle
Yiba Uhlukile, Uphumelele! ! !
I-Chongqing Nicot Industry and Trade Co., Ltd. ingumkhiqizi wezithuthuthu osezingeni eliphakathi e-Chongqing, isizinda esikhulu kunazo zonke sokukhiqiza izithuthuthu eChina. Wonke amalungu ayinhloko anesipiliyoni seminyaka engaphezu kwe-15 ebhizinisini elihamba phambili elisenza ukuthi sikunikeze isevisi esebenzayo nephumelelayo.
Kusukela ngosuku lokusungulwa ngo-2016, uNicot ugxile ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni izithuthuthu ezihlukile ezinempahla egcwele yezobunhloli. Sigxila ekukhiqizweni kwemikhiqizo ehlukile, okwamanje ikakhulukazi imikhiqizo yezithuthuthu ezingekho emgwaqeni. Izingxenye ezingaphezu kuka-50% zesithuthuthu sethu ziklanywe futhi zathuthukiswa yithina okwenza amakhasimende ethu aqhelelane nomncintiswano omubi wemikhiqizo ephindwe kabili. Imajini yakho ethengisa imikhiqizo yethu iqinisekile.
Yenza ngokwezifiso kumakhasimende ahlukene ukuze uhlangabezane nezidingo ezahlukene.
Lokhu kuphinde kwasivumela ukuthi sibambe iqhaza ezimakethe ezinkulu zezithuthuthu ezingaphandle komgwaqo e-Philippines, eRussia, e-Ukraine njll. eminyakeni embalwa nje. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo yethu ithengiswa e-United States, eNingizimu Melika, e-Afrika njalonjalo!
Ngibheke ngabomvu ukujoyina kwakho okulandelayo.
Vele ushiye i-imeyili yakho noma inombolo yocingo efomini lokuxhumana ukuze sikwazi ukukunikeza ngamasevisi amaningi!